Kulankii Koowaad ee Golaha Shacabka oo maanta u baaqday Kooram la’aan! – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa ku dhawaaqay inuu baaqday maanta Kulankii 1-aad ee Golaha, kadib markii ay soo xaadiri waayeen Xildhibaanno Kooram ahaan sharci ka dhigi kara inuu furmo Kulanka Golaha. Guddoomiyaha Golaha Shacabka, oo waqti hal saac ah u qabtay inuu dib u dhaco kulanka si loo helo Kooram, ayaa daqiiqado kadib soojeedintiisaas waxa uu sheegay inuu Kulanka 1-aad ee Golaha dib u dhacay.
Sababta waxa uu ku sheegay inuusan Kooramka Goluhu maanta dhameys ahayn. Wariyayaasha Kalfadhi, oo jooga Xarunta Golaha Shacabka, ayaa sheegaya in ay Xildhibaannada Golaha Shacabka qaar ku tilmaameen Xildhibaannada maqan ee uu Kooramka la furmi la’yahay ay yihiin “Wasiiro”, ayna ugu talogaleen inuusan Kulanka 1-aad furmin maanta. Waxaa la soo sheegayaa inuu go’aanka Guddoomiye Mursal ka dhex dhaliyey buuq xildhibaannada joogay golaha.
Guddoomiye Mursal ayaa durbadiiba uu golaha u sheegay baaqashada Kulanka Golaha ee maanta waxa uu ka baxay albaabka, waxaana markaas kadib ay Xildhibaannada qaar la soo baxeen waraaqo ay ku qoran yihiin “Golaha shacabku waa wakiilladii & codkii shacabka la xasuuqay. Ma ahan Gole Sacab”.
Oraahdaas ayaa u muujineysa garab istaag shacabka, laakiin waxaa suurtagal ah iney siyaasad kale uga dan lahaayeen. Xildhibannada joogay Golaha waxay qaarkood sheegeen inuu Guddoomiyuhu diiday in la aqriyo xildhibaannada maqan oo, sida ay sheegeen, haddii la shaacin lahaa amagacyadooda wada noqon lahaa wasiiro, sida ay hadalka u dhigeen.
Haddiin uu Kulanka 1-aad ee Kalfadhiga 5-aad ee Golaha Shacabka furmi lahaa maanta waxa uu qorshuhu ahaa dhageysiga warbixin uu Guddiga Dib-u-eegista iyo Lasocodka Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ka siin lahaa Golaha Shacabka shaqooyinkii uu ka soo qabtay dastuurka, 2-dii sano ee uu ku hawlanaa.